Dzokera kuIOS 9 kubva kuIOS 10? Zvinhu zvekuchengetedza mupfungwa | IPhone nhau
Dzokera kuIOS 9 kubva kuIOS 10? Zvinhu zvekuchengetedza mupfungwa
IPad nhau | | iOS 10, watchos
Mushure memavhiki akati wandei neyekutanga Beta yeIOS 10, vazhinji vevashandisi vakangoiisa kuti vaedze nhau kuti iyo nyowani vhezheni yeIOS inotisvitsa ivo vatoneta nekugadzikana kana kuenderana kwematambudziko ayo, seBeta iri, ikozvino ine iOS 10. Ndosaka kune vazhinji venyu vanotibvunza isu kuti tingadzokera sei kuIOS 9, izvo zvinogoneka, asi tichifunga zvakateedzana zvezvinetso zvaunofanira kuziva nekuti vanogona kuita kuti uchinje pfungwa dzako.
1 Kudzorera kana kugadzirisa?
3 Ngwarira neako Apple Watch
4 Maitiro ekudzikisira kuenda kuIOS 9 kubva iOS 10
Kudzorera kana kugadzirisa?
Pano ini ndinogara ndichipa mhinduro yakajeka: dzosera. Kana kana uchiisa kubva kuIOS 9 kuenda kuIOS 10 inonyanya kukurudzirwa kudzoreredzwa kwakachena kudzivirira kudhonza matambudziko uye junk mafaira kubva pane imwe vhezheni kuenda kune imwe, patinoenda neimwe nzira izvi zvinova zvekumanikidzirwa. SeBeta vhezheni, iOS 10 ichine mabhugi mazhinji anogona kukonzera kuti kana iwe ukakanda kune iOS 9 usina kuita kudzoreredza kubva pakutanga, unopedzisira uine matambudziko akafanana. Neichi chikonzero, zviri nani kuti usashandise iyo yekuvandudza asi asi kudzoreredza.
Nhau dzakaipa: iyo backup yawakaita muIOS 10 haigone kushandiswa muIOS 9. Saka kana iwe ukavimba nemakopi eICloud uye ukasiya iyo otomatiki kumisikidza ungangodaro usisina kopi yeIOS 9 asi yeIOS 10, uye hauchakwanise kuidzosera kuchishandiso chako kana iwe waita iko kuderera. Izvi zvave zvisiri chinhu chitsva, asi zvagara zvichiitika neIOS, asi havazi vanhu vazhinji vanozviziva kudzamara vazviziva kubva kune kwavo ruzivo.
Kana iwe ukachengeta kopi yeIOS 9 muICloud kana iTunes, saka ehe unogona kuishandisa kuti uwanezve data rako mushure mekunge watora kune iOS 9.
Ngwarira neako Apple Watch
Kana iwe wakamboedzawo Apple Watch Beta, watchOS 3.0, saka ndine urombo kukuudza kuti chero bedzi uchirodha pasi iPhone yako kuIOS 9, haugone kushandisa wachi yako., nekuti iyi yazvino vhezheni yeWOSOS inoda kuti iOS 10 ishande. Uye kana iwe uchifunga nezve zvakare kurodha pasi yako Apple Watch kuti utariseOS 2, zvakare yakaipa nyaya, nekuti hazvigoneke kunze kwekunge iwe uchizozvitumira kune technical technical uye ubhadhare kuti zviitwe. Muchidimbu, kana iwe ukashandisa watchOS 3, gara pane iOS 10 kunze kwekunge iwe uchida kuchengeta yako Apple Watch mudhirowa kusvika munaGunyana.
Maitiro ekudzikisira kuenda kuIOS 9 kubva iOS 10
Kana mushure mekuverenga izvi iwe uchiri kuda kudzikira kune iOS 9, une gwara rekuti ungazviita sei mukati ichi chinyorwa iine zvese zvakakosha kuti usazove nematambudziko nemaitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Dzokera kuIOS 9 kubva kuIOS 10? Zvinhu zvekuchengetedza mupfungwa
Izvi zvinotaurwa pakutanga kune vanokurumidza avo vanokanda maoko avo kumusoro.
Ndinovimba vanhu vanoverenga chinyorwa ichi vochiisa pamoto kuitira zviito zvinoteedzana zvisina basa.
Nguva dzose, nguva dzose uye nguva dzose. Bvunza mibvunzo uyezve, kana pasina njodzi, ita. Uye kwete imwe nzira yakatenderedza.
Nyika inotevera yekupa ruzivo pamusoro pekutakura kwevanhu ichave Japan
Mumwe mumhan'ari weCelebgate anobvuma mhosva